कसरी बनाइन्छ सेक्स रोबोट ? थाहा पाउनुहोस् – Ekathmandunepal
Homeबिज्ञान प्रबिधिकसरी बनाइन्छ सेक्स रोबोट ? थाहा पाउनुहोस्
कसरी बनाइन्छ सेक्स रोबोट ? थाहा पाउनुहोस्
२८ मंसिर २०७४, बिहीबार १२:२६ ekathmandu Nepal बिज्ञान प्रबिधि 0
विश्वको सबैभन्दा विवादित विषयमा सेक्स रोबोट पनि पर्छ । आफ्नो परिचय दिनासाथै ‘आइ लभ यू’ भन्ने सम्यान्था नामक सेक्स रोबोटले लामो समयसम्म विश्वको ध्यान केन्द्रित गराएको थियो । सुन्दर सुनौलो कपाल र नीलो आँखाका कारण सम्यान्थाले जुनसुकै पुरुषको मन लोभ्याउन सक्ने बताइएको थियो । तर समान्थ्या बच्चाहरु र परिवारका साथै बस्ने खबर आएपछि भने जताततै यसबारे चर्चा भएको थियो । उनलाई इन्जिनियर सेर्गी सैन्टोसले बनाएका हुन् ।
उनको सो कारखानाको चारैतिर तिनै डलहरुको टाउको, हात, कपाल र अन्य शरीरका भागहरु छरिएका थिए । यी सबै रोबोटहरुलाई सकेसम्म वास्तविक मानिसको रुप दिने प्रयास गरिन्छ । यी रोबोटको छालाका भित्र सेन्सरहरु लगाइएका हुन्छन् जसकारण उनीहरुलाई हामीले छुँदा प्रतिक्रिया दिने गर्छन् । यसबाहेक यिनका शरीर पनि लचिलो र जतापनि फर्काउन मिल्ने बनाइएको हुन्छ । यसलाई तपाईले सजिलै बोकेर जतापनि लैजान सक्नुहुनेछ । चाहेमा यिनीहरुसँग कुरा समेत गर्न सकिन्छ ।
खबरका अनुसार यस्ता सेक्स डलको उद्योगले हरेक वर्ष २३ बिलियन यूरोको कमाई गर्ने गरेको छ । सेर्गीले बनाएको एउटा सेक्स डलको मूल्य मात्र ४ लाख रहेको बताइएको छ । एजेन्सी
संसार कै पहिलो रोबोट नेता, २०२० मा चुनाव लड्ने तयारीमा
बुढाको भन्दा त तपाईंको ठुलो रहेछ (742)
मैले मेरो २० बर्से दिदी सँग यसरी रात बिताएको थिए… (569)
सानिमालाई सेक्सको प्रस्ताव राख्दा… (286)
खुट्टा फर्किने भनेको के हो ? किन फर्किन्छ खुट्टा ? (276)
यौन सम्पर्क गर्नुअघि पिसाब फेर्नु सहि कि गलत ? (187)
फिल्ममा आउँनु अघि यस्ता थिए नेपाली चलचित्रका चर्चित… (177)
म बाहिर हेर्दा खुसि छु तर मिठो सेक्स कहिले भएन- के… (165)
सेक्स पावर” तुरुन्तै अत्यधिक मात्रामा बढाउने घरेलु औषधी (144)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,399)
घरबेटी दाइले जबर्जस्ती मेरो रातो पेन्टी भित्र हात छिराए (3,261)
मेरो होल नाइट’ ! युवा र युवतीले एकचोटी पढ्नै पर्ने… (2,345)
कक्षा १२ मा अध्ययनरत युवातीको गोप्य भिडियो लिक.घरमा… (2,220)